Testing Facebook API — MYSTERY ZILLION
Testing Facebook API
User ကို Promotion Gift Voucher ပေးတဲ့ အစီအစဉ်လေးအတွက် ဒီလိုမျိုးလုပ်ဖို့ စဉ်းစားထားပါတယ်။
User must be click like on facebook fan page
If user like Facebook page, go to signup form (username, email)
After that, Gift Voucher will send to user email
ဒီနေရာမှာ နည်းနည်းလူလည်လုပ်ထားတာလေးတွေ ထည့်ထားချင်ပါတယ်။ အကယ်၍ User က Facebook Page ကို like လုပ်မထားဘူးဆိုရင် Signup Form ဆီသွားတဲ့အဆင့်ကို ပေးမသွားတော့ပါဘူး။ ဒီတော့ User အနေနဲ့ ကိုယ့် Facebook Page ကို အမှန်တကယ် Like လုပ်ထားလားမထားလားသိရအောင် စစ်ဖို့ လိုလာပါပြီ။
ဒီတော့ ကျွန်တော် Facebook မှာ App တစ်ခု Create လုပ်တယ်။ ဒီ App က User ရဲ့ Profile, Likes စတာတွေကို Access လုပ်ဖို့အတွက်ပါ။
Project ရဲ့ Step-1 မှာ login with Facebook ဆိုတဲ့ Login button တစ်ခုပဲ ထုတ်ပြထားတယ်။ အဲဒီကနေ User က Facebook App ကိုအသုံးပြုပြီး Login ဝင်ရပါမယ်။ အကယ်၍ Facebook မှာ Login ဝင်ထားပြီးသားဆိုရင်လည်း ကျွန်တော် Create လုပ်ထားတဲ့ App ကနေ Access လုပ်တာကို Allow လုပ်ခွင့်ပေးရပါမယ်။
User က Logged in လည်း ဝင်ပြီးသွားပြီ၊ Facebook App ကနေ Access လုပ်တာကိုလည်း Allow ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင် Step-2 ဖြစ်တဲ့ signup2 page ကို သွားပါမယ်။ signup2 page မှာတော့ Facebook Like Box တစ်ခုထဲကိုပဲပြထားပါမယ်။ အဲဒီမှာ User က Like box ထဲက Like ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ လက်ရှိ User အနေနဲ့ Page ကို အမှန်တကယ် Like လုပ်လိုက်ပြီလားဆိုပြီး သွားစစ်ပါမယ်။
တကယ်လို့ User က Page ကို like လုပ်ပြီးပြီဆိုရင် နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ Name, Email ဖြည့်ရမယ့် Signup Form ရှိရာ Page ကိုသွားပါမယ်။
Signup Form မှာ ဖြည့်စရာရှိတာတွေဖြည့်ပေးပြီးရင်တော့ User ဖြည့်ထားခဲ့တဲ့ Email Address အတိုင်း Voucher ကို email ပို့ပါမယ်။ ဒီမှာ ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာ အဆုံးသတ်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ရှည်စွာနဲ့ဖတ်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မေးချင်တာက ခုမှစမှာပါ။ Facebook SDK က သိပ်ပြီးမသုံးဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီအတိုင်းလုပ်ထားတာ နည်းစနစ်ကျရဲ့လား။ Signup အဆင့်တွေအတွက် View Page တွေကိုလည်း3Pages ရေးထားပါတယ်။ သိချင်တာက ဒီထက်ပိုကောင်းမယ့် နည်းလမ်းများရှိဦးမလား၊ ရေးထားတဲ့နေရာတွေမှာ မလိုအပ်ပဲဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းတွေများ ပါနေမလား။ တခြားဘယ်လိုနည်းမျိုးနဲ့ User က ကိုယ့်ရဲ့ Page ကို Like လုပ်တယ် မလုပ်ဘူးဆိုတာ စစ်လို့ရနိုင်မလဲ။
( Facebook SDK က အခုမှစပြီးသုံးဖူးတာမို့လို့ မေးထားတဲ့အကြောင်းအရာက စိတ်ပျက်စရာကောင်းနေခဲ့မယ်ဆိုရင် သည်းခံပေးကြပါ )
facebook ကနေ user email ကို ရနိုင်တယ် မဟုတ်လား ?
အဆင့် ၃ မှာ တကယ်လို့ user တစ်ယောက်ကပဲ like ထားပြီး name , email ကို အမြဲ ပြောင်းလို့ရနေနိုင်တယ်။ တနည်းပြောရင် user တစ်ယောက်က promotion တစ်ခုထက် မက ရနိုင်တယ်။
အဲဒီ အတွက် facebook ID နဲ့ စစ်ထားပြီးပြီလား ?
facebook ID တစ်ခုကို promotion တစ်ခုပဲ ရမယ်လို့ စစ်ဖို့ ကျန်နေတယ်။
ဟုတ်ကဲ့အစ်ကို ကျွန်တော် Facebook User ID နဲ့ပဲ စစ်ထားပါတယ်ခင်ဗျ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။